Mozika Niharan’ny Sivana Sy Feo Voaràra Ao Angola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2013 8:47 GMT
Noraofin'ny polisim-pirenena Angoley tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fanapenam-bava izay manozongozona ny fitondrana ao Angola ny andiana haino aman-jery novokarin'ny mpikatroka Angoley. Anisan'izany ny DVD vaovao an'ilay mpiangaly rap Brigadeiro 10 Pacotes, mitantara ny “fiainana sy asan'ilay mpitarika revolisionera manan-tantara Jonas Savimbi” [en] sy ny kapila mangirana (CD) sasany an'ireo mpiangaly mozika Chingui Chinhama.
Ho setrin'izany fihetsika izany, niantso fihetsiketsehana eo anoloan'ny Biraon'ny Fadin-tseranana ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Quatro de Fevereiro ao Luanda ny mpamokatra ny lahatsarin'i Brigadeir ao amin'ny Independente Universal Produções niaraka tamin'ny Movimento Revolucionário [Hetsika Revolisionera] tamin'ny 7 Martsa 2013, mba hitaky ny hamerenana ireo horonantsary noraofina. Nisongadina ny tatitra, indrindra tao amin'ny Facebook, ka nirotsaka an-tsehatra nanaparitaka ny fihetsiketsehana tamin'ny fomba feno herisetra ny polisy.
Sary rakotra ao amin'ilay DVD “O Líder Revolucionário”. Angola 24 Horas nilaza hoe , “mifantoka momba ny olana ao amin'ny fiarahamonina, ny tsy fitoviana ara-tsosialy ary ny herisetra politika ao Angola sy ny fivoaran'ireo zanaky ny mpitondra ao Angola ny sarimihetsika Brigadeiro 10 Pacotes”.
Voalaza fa nisy ny namoy ny ainy, na dia nisy aza ny fitsipahana izany tatitra izany. Saingy, raha nisy ny fitadiavana “porofo mivaingana” dia nomena tsanganana malalaka ao amin'ny Foibe Angola amin'ny pejy “tsaho miely” raha resahina ny momba ny “Mano Negro”, na Negrão, izay mpanatontosa ny vokatr'i Brigadeiro. Ny ampitson'ny fihetsiketsehana, nitady valinteny tao amin'ny pejy Facebookn'ny Brigadeiro 10 Pacote i Pedrowski Teca
Omaly, nisy ny tatitra nilaza fa novonoin'ny polisim-pirenena Angoley ilay mpamokatra ny horonantsarimihetsik'i Brigadeiro Pacotes amin'ny Ilay Revolisionera, fantatra amin'ny anarana hoe Negrão nandritra ny fihetsiketsehana ho fitakiana ny hamerenana ny kapila mangilatr'i Brigadeiro 10 Pacotes noraofin'ny fitondrana [teo alohaloha teo]. Tamin'ny vaovao tao amin'ny Club-K, nanamafy i Hugo Kalumbo fa nahita ny namako voatifitra, saingy nilaza ny manampahefana fa nosamborina fotsiny i Negrão ary notànanan'ny Mpitandro ny Filaminana Angoley (FAA), satria nambaran'ireto farany fa araka ny lalàna, tsy mahazo mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana ny mpitolona.
Tamin'ny 7 Martsa 2011, izany hoe roa taona katroka alohan'ny fihetsiketseham-panoherana ny fandraofana ireo DVD, no nanombohan'ny hetsi-panoherana ny fitondrana manao hoe “lava loatra ny 32 taona“, izay mitaky ny fialàn'i José Eduardo dos Santos eo amin'ny fitondrana. Tamin'ny volana Aogositra 2012, voafidy hiasa mandritra ny fe-potoa-piasana 5 taona vaovao manaraka indray i José Eduardo dos Santos.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Deutsche Welle, niresaka momba ny fikatrohana nandritra ny roa taona nataony i Jang Nomada ary nilaza izy fa “sarotra ny asa ary misy ireo hery mampisaraka ny olona manangana sy mampitoetra izany karazana fomba fisainana izany”, nanondro ny hip-hop ho anisan'ny zavatra henjehin'ny fitondrana izy.
Tsy vao sambany no voasivana ny asa-mozikan'i Brigadeiro 10 Pacotes; tamin'ny fiafaran'ny taona 2011, noraràn'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ny fivarotana ny mozikany “Ditadura da Pedra”.